Waa Maxay Siyaasad, Waa Kuma Siyaasi? | Qaran News
Waa Maxay Siyaasad, Waa Kuma Siyaasi?
Writen by Qaran News | 11:03 am 2nd Jul, 2016
Waxaynu maqaalkan ku lafa guri doonaa waxa ay tahay siyaasadu iyo kuma ama qofkee siyaasi ah, taas oo aynu ku salayn doono nidaamka siyaasada wadamada dunida iyo midka ka jira geyiga Soomaalida xilligan oo ah mid salka ku haya qabiil la siyaasadeeyey.
Waa Maxay Siyaasad?
Siyaasadu waa mabaadi aas aasi ah oo dawladi ku dhaqanto ama raacdo si ay u gaadho yoolkeeda mustaqbalka isla markaasna ay ku maamusho dadka ay u xukumeyso si ay u gaadhaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal. Taas oo isku xidheysa iyada iyo dalalka kale ee dunida iyada oo laga duulaayo danaha gaarka ah ee mushtamaca ay daawlada u tahay, iyada oo loo maraayo hab sharci ah oo aan ka hor imanaynin dastuurka iyo xeerarka kale ee markaas ee mabnuucaya joojinta iyo ka hor tagida wax kasta oo dhib ku ah hanaanka iyo hor u socodka qaran kasta oo dunida jira.
Noocayda siyaasada waxa loo qeybiyaa saddex waxaanay kala yihiin, Siyaasada Dadweynaha, Siyaasada Caafimaadka, iyo Siyaasada Sharciyada.
Tan micnaheedu wuxu yahay waa mid waajib uu ka saran yahay dawlada joogteynteeda iyo inay deristo baahiyaha muwaadinka iyada oo loo maraayo xaq uu u siinaayo dastruurka la raacayo ee dalka lagana dhabeynaayo in laga caawiyo muwaadinka wax uu u baahan yahay si ficil ah.
Keliya kuma ee ka in la sameeyo caymisyo iyo u adeegida koox gaara ah, balse wuxu sidoo kale xidhiidh la leeyahay, waa mid si guud loogu adeegaayo qaranka si looga hortago cudurada faafa tusaale ahaan, markii la helay cudurka qaaradaha isaga gudba ee AIDS waxay ahayd 1980 kii, dalalkii dunidu waxay raadiyeen si looga badbaadiyo dadkooda waxaana loo maray habka ah in la baro dadka aqoonta caafimaadka bulshada ( Public Health) iyo wacyi galino fara badan oo joogta ah.
Isna waa mid kale oo mihiimadiisa leh waxa sdoo kale loogu yeedhaa siyaasada bulshada.
Waxa uu qaabilsan yahay shuruucda si loo qeexo, waxa ka dhexeeya waxyaabaha kale, waxa loo tixgelinaayo denbi inay yihiin, xukunka danbiga, iyo iyo cida masuulka ka noqonaysa inay maamusho xukun ciqaabeedka isla markaasna fulinaysa, sida dilka oo kale.